FAMPIHAVANAM-PIRENENA : Tontosa etsy Ampefiloha ny fifamindram-pahefahana
Notontosaina omaly tetsy Ampefiloha ny fifamindram-pahefahana teo amin’ireo biraon’ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy teo aloha sy ny birao vaovao vao tafatsangana ny faran’ny herinandro lasa teo izay tarihan’ny filohany, Maka Alphonse. 19 octobre 2017
Ambetintenin’ity farany hatramin’ny fotoana nahavoafidy azy ho filohan’ny Ffm fa hanatanteraka araka ny tokony ho izy izay fampihavanam-pirenena nampiandraiketina azy ireo izay, ireo mpikambana. Toky nomeny ihany koa ny hisian’ny fampihavanana eny ifotony sy hampahalala ny vahoaka tsy ankanavaka ny antom-pijoroan’ity rafitra vaovao vao natsangana ity.
Raha tsiahivina dia tontosa ny faran’ny herinandro lasa teo ny fihodinana faharoa tamin’ny fifidianana izay ho filohan’ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy vaovao izay nahalany an’i Maka Alphonse, izay efa mpanao gazety sady efa mpikambana tao anatin’ny Ffm teo aloha. Tafatsangana tamin’io ihany koa ny birao handrafitra ity rafitra vaovao ity, izay nahitana ny filoha lefitra, ny mpampaka-teny sy ny vaomiera. Amin’ireto farany dia samy ananan’ny renivohi-paritany solotena tsirairay avy. Taorian’izay nisy avy hatrany ny fivoriana notanterahan’ireo mpikambana izay mbola tsy nisy nipika hatreto ny vontoatin’izany.
Mivoy resa-poko sy fankahalana ny filohan’ ny oniversiten’i Toamasina sy ny ekipany RAHARAHA BARIKADIMY (4690) 25 février 2021 Hivadika ho “tolona” ny tatitry ny Depiote Tim MIKATSAKA FANDATSAHAN-DRA (231) 25 février 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (143) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (138) 2 mars 2021 Handray andraikitra hatrany hisorohana izay rehetra mety ho fanakorontanana EMMO/NAT (78) 25 février 2021 « Hatao laharam-pahamehana ny fampianarana » FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA (70) 25 février 2021